Madaxda Muqdisho kaga qeyb galaysa shirka urur goboleedka IGAD oo la shaaciyey - Haldoornews
Madaxda Muqdisho kaga qeyb galaysa shirka urur goboleedka IGAD oo la shaaciyey
Muqdisho(Haldoornews)-Magaalada Muqdisho waxaa si rasmi ah uga furmi doona 10-ka bishan aynu ku jirno shir madaxeedk dalalka xubnaha ka ah Urur gobaleedka IGAD sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Maalgashiga Soomaaliya Mudane Cabdisalaam Cumar Hadliye oo maanta Saxaafadda kula hadlay Magaalada Nairobi.
Hadliye ayaa sheegay in shirka ay ka soo qeybgali doonaan Madaxweyneyaasha dalalka Ugandha, Sudan, Jabuuti, Kenya, Koonfurta Sudan iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya.
Waxaa uu sheegay in shirkan uu yahay mid dalalka IGAD ay ku muujinayaan nabada iyo horumarka ka jira Somalia.
”Wasiirada arrimaha Dibadda IGAD ayaa sanadkii hore ku kulmay Muqdisho, Waxaa lagu balamay in shirka Madaxda dalalka IGAD uu ka dhaco Magaalada Muqdisho”. ayuu yiri Wasiir Hadliye.
Wasiirka ayaa soo dhaweeyay sida Urur gobaleedka IGAD uu u garab istaagay Soomaaliya iyo dadaalka ay mar walba ugu jiraan daganaashaha iyo horumarka Soomaaliya.
Tallaabadan ayuu sheegay inay meesha ka saari doonto cabsida kooxo uu ugu yeeray argagixiso dooneyaan inay ka abuuraan Soomaaliya, isagoo xusay in maanta Soomaaliya ay mareyso Marxaladdii ugu dambeysay ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada, lagana gudbayo cabsidii ka jirtay.
Shirka Madasha Wada-tashiga Qaranka Somalia oo maanta la filayo inuu Muqdisho ka dhaco